Tag: mgbasa ozi vidiyo | Martech Zone
Kpido: mgbasa ozi vidiyo
Otu Ndị Nkwusa Pụrụ Isi Kwadebe Nkwado Teknụzụ Iji Rute Ndị Na-ege Ntị Na-agbasawanye
Tọzdee, Disemba 10, 2020 Tọzdee, Disemba 10, 2020 Elena Podshuveit
Ịgụ Oge: 7 nkeji 2021 ga - eme ya ma ọ bụ mebie ya maka ndị mbipụta. Afọ na-abịanụ ga-eme ka nrụgide nke ndị nwe ụlọ mgbasa ozi okpukpu abụọ, naanị ndị egwuregwu kachasị nghọta ga-anọrịrị n'elu mmiri. Mgbasa ozi dijitalụ dị ka anyị si mara na ọ na-abịa na njedebe. Anyị na-akwaga n'ọma ahịa ndị ọzọ ezighi ezi, ndị nkwusa kwesịrị ịtụgharị uche n'ọnọdụ ha na usoro okike a. Ndị nkwusa ga-eche ihe ịma aka ndị dị egwu ihu na arụmọrụ, njirimara onye ọrụ, na nchebe nke data onwe onye. Ka ewere
Celtra AdCreator: Ngosipụta Dijitalụ na Mgbasa Ozi Vidiyo CMP
Tuesday, January 2, 2018 Tuesday, January 2, 2018 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 2 nkeji AdCreator wuru na ihe karịrị 50 elu dọrọ na dobe mmiri na ihe karịrị 200 tupu-anwale, atụmatụ a na-emezi maka okike ad. Ihe ndebiri a na-eme n'ime na-eme ka imepụta ngwa ngwa, mmepe, ma hụkwa na nkwekọ, gụnyere Loclọ Ahịa Store, Inline Video Player, Galleries, Social Sharing na ndị ọzọ. A na-anwale akụkụ niile na atụmatụ nke AdCreator n'ofe ngwaọrụ, sistemụ arụmọrụ, na gburugburu. AdCreator nwekwara njiri mara njigide mmado na-akpaghị aka, yabụ na ịmara ihe ị hụrụ bụ ihe onye ọrụ ahụ bụ.
Clipcentric: Ogaranya Media na Video Ad Creative Management
Ịgụ Oge: 2 nkeji Clipcentric na-enye ndị ọrụ ya ọtụtụ nhọrọ nke ngwa ọrụ na ndebiri na-enye njikwa zuru oke na usoro ọ bụla nke usoro mmepụta nke na-eweta mgbasa ozi mgbasa ozi na-anabata ozi ọma. Ndị otu mgbasa ozi nwere ike ịmepụta ngwa ngwa ma zụlite mgbasa ozi HTML5 siri ike nke na-agba ọsọ n'enweghị nsogbu na gburugburu ebe obibi ọ bụla. Ebe Drag-na-Dobe - Na-eji nwayọ dọrọ ma dobe ihe mgbasa ozi n'ime ebe ọrụ akọwapụtara ngwaọrụ maka njikwa zuru oke, yana ebe ihe ị hụrụ bụ ihe ị nwetara. Oru ederede HTML5 siri ike - Mepụta
Vungle: Monetize gị Mobile App na Na-App Videos
Tuesday, February 7, 2017 Tuesday, February 7, 2017 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 2 nkeji Oghere nke ngwa mkpanaka bụ asọmpi na ụbọchị nke ịmepụta ngwa, na-akwụ ụgwọ ole na ole, ma na-atụ anya ịlaghachi na ntinye ego nọ anyị n'azụ n'ọtụtụ ọrụ. Agbanyeghị, ịzụrụ ihe dị n'ime ngwa na mgbasa ozi ngwà na-aga n'ihu na-enyere aka na-echekwa ego dị egwu nke ndị mmepe egwuregwu na ngwa ngwa ekwentị na-etinye. Vungle bụ otu n'ime ndị isi na ụlọ ọrụ a, na-enye ndị mbipụta SDK siri ike maka mgbasa ozi vidiyo mmekọrịta
Ndepụta nke Standard Ad nha n'ihi na Online Advertising
Tuesday, July 21, 2015 Monday, October 12, 2015 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 3 nkeji Kpụrụ dị mkpa ma a bịa na mgbasa ozi mgbasa ozi n'ịntanetị na nha oku ime ihe. Kpụrụ na-enyere akwụkwọ dị ka nke anyị aka ịhazi ndebiri anyị ma hụ na nhazi ahụ ga-anabata mgbasa ozi nke ndị mgbasa ozi nwere ike meworị ma nwalee n'ofe net. Site na Google Adwords ịbụ onye nnabata mgbasa ozi, arụmọrụ ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa gafere Google na-ekwupụta ụlọ ọrụ ahụ. Top Nrụọrụ Mgbasa Ozi na Google Leaderboard - pikselụ 728 n'obosara site na 90 pikselụ ogologo Half-Page -
1 2 Ọzọ →
Page 1 nke 2